Global Voices teny Malagasy » Masaki C. Matsumoto: Miteny Anglisy , LGBT, Hafa Fitiavana Ary Feminista Ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Masaki C. Matsumoto: Miteny Anglisy , LGBT, Hafa Fitiavana Ary Feminista Ao Japana
Voadika ny 05 Janoary 2017 0:39 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Sary avy amin'i Masaki Matsumoto tao amin'ny Pejy Facebook Queer Eikawa .
Nampifandray an'i Japana tamin'ny sisa amin'izao tontolo izao ilay mpikatroka hafa fitiavana sady feminista Masaki C. Matsumoto, ary afaka niresaka momba ny olan'ny LGTBQ + tamin'ny teny Anglisy avy amin'ny fomba fijery Japoney.
Ny bilaogy Gimme a Queer Eye  an'i Masaki dia efa ela no niasa fa efa hatramin'ny taona 2004 izany, ary nahitana lohahevitra isan-karazany  amin'ny teny Anglisy, anisan'izany ny fiovan-tsatan'ireo LGBT ao Japana -sy ny rohy mankany amin'ny tetikasa mitovy fijery toy ny Rad-queers Speaking English For You  na Rad-hafa fitiavana Miteny anglisy Ho Hianao , izay nanaovan'i Masaki teny fampidirana hoe:
Mbola tsy nahatsapa ho leon'ny fanaovan-gazety amin'ny teny anglisy LGBT toy izany aho, na dia tahaka ny ahoana aza no iampanganay voahikiliklika noho ny fironam-pitiavana anananay manerana izao tontolo izao, amin'ny fanohizany ny famariparitany ireo voahikiliklika noho ny fironam-pitiavana ananany avy amin'ny faritra tsy miteny anglisy amin'ny fomba fijery matetika mpanavakavam-bolokoditra, mpanandratra olona mitovy fiaviana aminy, mpanjanaka, miseho ho liam-pandrosoana, ary tena marivo fomba fijery amin'ny fananana ny aretina ara-tsaina te-ho Mesia? Leo aho.
Mampiseho hatrany ny fahadisoam-panantenana amin'ny fandokoan'ny fampitam-baovao ivelan'ny firenena amin'ny politikan'ny LGBTQ+ ao Japana i Masaki ary nanazava fa:
Ny (fiheveran)-diso mahazatra indrindra, fahita amin'ny lahatsoratra rehetra amin'ny teny anglisy dia tsy maintsy manao izao manaraka izao ho mazava tsara:
>> Tara aorian'ny Tandrefana i Japana . Tsy misy na inona na inona ara-dalàna momba ny fiarahan'ny pelaka, ary matahotra ny haneho izany ny olona.
>> Saingy andalam-piovana ny zava-misy. Ary raisin'ny LGBT rehetra ao Japana miaraka amin'ny hafanam-po ny fiovana toy izany.
Nanampy tamin'ny fanadiovana ny fifanjevoana i Masaki tamin'ny alalan'ny vilaogy nalefa tao amin'ny YouTube, antsoina hoe Masaki's QueerESL . “Raha nahatsapa ho somary diso fanantenana tamin'ny lahatsoratra ho fitaovana/endrika fampitam-baovao amin'ny vahoaka,” hoy i Masaki tao amin'ny teny fanolorana ny fantsona “Nanomboka nanao lahatsary miompana amin'ny LGBT, sy ireo voahilikilika noho ny fironam-pitiavana tsy mahazatra, sy ny feminista aho !”
Iray amin'ireo lahatsary bilaogin'i Masaki farany ny ” Zavatra 5 tsy Fantatrao Momba ny LGBTQ ao Japana”:
Nandefa lahatsoratra  tao amin'ny tranonkala  mifandraika amin'ny antsafa vao haingana nataon'i Matsumoto niaraka tamin'ny Anime Feminist, tranonkala manadihady ny Sarimiaina Japoney sy manga  amin'ny alàlan'ny maso feminista i Sokka shot first , mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera MetaFilter  any Etazonia. Efa nomarihina tao amin'ny  MetaFilter  fa “ho raisina an-tanandroa amin'ny fanolorana tsikera japoney ankoatra ny fomba fijery tandrefana ananan-dry zareo manokana” ny Anime Feminist; tsy nandiso fanantenana i Masaki , tamin'ny fanomezana ny antsafa tamin'ny dikanteny Anglisy sy Japoney.
Tao amin'ny antsafa , ankoatra ny firesahana momba ny tantarany teo aloha (nipetraka tany Etazonia sy tany Nouvelle-Zélande izy, ary ankehitriny nanokatra toeram-pisotroana (bar) any amin'ny faritra ambanivohitra ivelan'i Tokyo), dia nanao fanamarihana vitsivitsy momba ny karazana vondrom-piarahamonina LGBTQ+ sy ny fifandraisana misy ao Japana i Masaki, nizara ny fihetseham-pony ihany koa izy raha toa ka manana endrika tsara ao amin'ny kolontsaina pop Japoney ny olona LGBTQ+ (nanolotra lahatsoratra amin'ny teny Japoney sy Anglisy i Masaki tamin'ny antsafa Anime Feminist):
Amin'ny lafiny iray, tsy mino ny fomba fijery tena marina aho. Samihafa avokoa isika rehetra ary sarotra ny amariparitana ireo rantsana tsirairay ao amin'ny vondrona LGBTQ + ka milaza marina [momba azy ireo]. Kanefa, tsy midika izany fa afaka mamariparitra anay amin'ireo fomba fijery mahazatra ianareo. Manorisory izany, ary tsy mampivoatra ihany koa.
Nilaza i Masaki rehefa nanontaniana momba ny fahatsapany ny sarimiaina yaoi/BL sy manga , izay maneho ny fiarahan'ny lehilahy tia lahy mikendry vehivavy mirona kokoa amin'ny fitiavan-dahy hoe:
Manaiky aho fa tia azy ireo. Mahafantatra lehilahy pelaka maro sy lehilahy mankahala ny yaoi / BL aho, kanefa tsy maintsy lazaiko fa mahafinaritra ry zareo […] Yaoi / BL no mbola fototry ny mari-panondroana ahy, izay nanampy ahy hanaiky ny fitiavako lahy sy vavy. Feno fankasitrahana ny mpamorona yaoi / BL rehetra aho noho izany.
Raha ny momba ny fahasamihafan'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona LGBTQ + any Japana raha oharina amin'ny any Etazonia na Nouvelle-Zélande, dia nilaza i Masaki fa:
[Ao Japana] ‘mahafinaritra’ ny mihetsika tahaka ny tery saina. ‘Mankaleo’ ny ankasitrahana. Tsy olana ny fahateren-tsaina na mpiara-dia mety ho ao ambany ao. Manaova tahaka ny tery saina fotsiny, lazao hoe: ‘ Kimoi [maharikoriko] ny pelaka ‘, mifanoroha ny lehilahy samy lehilahy hanaovana ny lalao  batsu . ‘ Mahafinaritra’ izany ary tsy misy ny mitaraina, satria ‘mankaleo’ ianao raha mitaraina . Na ny orinasa fampitam-baovao aza tsy misy mandray izany ho matotra rehefa maharay fitarainana fisian'ny fankahalana pelaka sy/na trans (nanova taovam-pananahana) amin'ny fandaharan'izy ireo.
Midadasika ny antsafa rehetra , ary nanazava tamin'ny fomba maro ny fomba fijerin'i Masaki manokana momba ny LGBTQ + kolontsaina any Japana.
Nanamarika mazava foana i Masaki nandritra ny antsafa, sy tao amin'ny bilaoginy sy ny vilaoginy, fa azy samirery ny fanamarihany momba ny Japana , ary “miteny ho an'ny tenany manokana izy, fa tsy ho an'ny Japoney (+ vondron'olona) LGBTQ .”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/05/93673/
 Pejy Facebook Queer Eikawa : https://www.facebook.com/queeresl
 lohahevitra isan-karazany: http://gimmeaqueereye.org/about
 fiovan-tsatan'ireo LGBT ao Japana : http://gimmeaqueereye.org/entry/60959
 nanazava : http://gimmeaqueereye.org/entry/173
 Nandefa lahatsoratra: http://www.metafilter.com/163973/Masaki-C-Matsumoto-on-the-queer-experience-in-Japan
 Efa nomarihina tao amin'ny: http://www.metafilter.com/163007/Anime-fandom-has-a-cultural-resistance-to-critique#6773938
 Tao amin'ny antsafa: http://www.animefeminist.com/interview-masaki-c-matsumoto-queer-feminist-activist/
 sarimiaina yaoi/BL sy manga: https://www.youtube.com/watch?v=AdirAOB6PKQ